Qoyska iyo qofka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Xuquuqda iyo waajibaadka qofka / Qoyska iyo qofka
Micnaha aragtida ku salaysan shakhsigu waxa weeye in la qabo in qof waliba ka muhiimsan yahay koox dad ah. Micnaha aragtida ku salaysan koox dad ah waxa weeye in kooxdu ay ka muhiimsan tahay qofka shakhsiga ah. Qofka shakhsiga ahi wuxuu isu arkaan qof gaar ah oo isagu mas'uul ka ah naftiisa, baraarihiisa iyo mustaqbalkiisa. Waana qof gaar ah ee ma ahan qayb koox ka mid ah.
Micnaha aragtida kooxdu waxa weeye in danaha kooxdu ay ka muhiimsan yihiin danaha qofka shakhsiga ah. Waxa qofka shakhsiga sameeyo waxay sameyneysaa kooxda oo dhan. Bulshada ku dhisan isbahaysiga waxaa badanaaba ka jira isku xirnaan adag. Qof walba oo kooxda ka tirsan waxaa saaran mas'uuliyad. Aragtida ku salaysan kooxdu waxay badanaaba tahay in dad badan lagu xisaabiyo qoyska. Qaraabada iyo kooxdaba waxaa badanaaba loo arkaa sida qoys oo kale.